२०२१ मा किन्न को लागी सबै भन्दा राम्रो झार ग्राइन्डर को एक पूरा गाइड।
एउटा उपकरण घाँस पीस को लागी प्रयोग गरीन्छ कि भांग को फूलहरु लाई टुक्राहरु मा जोड़हरु, blunts, र कटोराहरु लाई तोड्छ। घाँटी चक्की को दाँत को बीच मा नगन प्लेस, त्यसपछि माथी माथी र तल को विपरीत दिशा मा ग्राइन्डर को तल घुमाउन को लागी फूल तोड्नुहोस्। जडीबुटी grinders एक किफ ca समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ...
एक ग्राइन्डर के हो र तपाइँ यसलाई भांग को लागी कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
चक्की nugs भरिएको (Leafly) यदि तपाइँ भांग को लागी नयाँ हुनुहुन्छ, तपाइँ grinders र कसरी एक को उपयोग गर्ने को बारे मा केहि प्रश्न हुन सक्छ। Grinders लगभग कुनै धुम्रपान पसल वा टाउको पसल मा खरिद गर्न सकिन्छ, वा तपाइँ खुद्रा पसलहरु को एक किसिम बाट एक अनलाइन आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू एक ग्राइन्डि card कार्ड को रूप मा सरल हुन सक्छ (l ...
ग्राइन्डर किन प्रयोग गर्ने?
जडी बूटी grinders लगातार फूल धूम्रपान गर्ने को लागी आवश्यक उपकरण हो। चाहे तपाइँ रोलिंग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँको मनपर्ने बोंग मा एक कटोरा पैकिंग वा एक पकेट चम्मच लोड, एक लगातार पीस सबै भन्दा राम्रो धुवाँ को लागी आवश्यक छ। Grinders पनि धूम्रपान गर्नेहरु लाई आफ्नो पी बाट धेरै प्राप्त गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ ...
3 महान् कारण एक जडीबुटी ग्राइन्डर को उपयोग गर्न को लागी तपाइँको कलियों को बस्ट
सबै भन्दा राम्रो जम्मा ग्रेट ग्रिन्डर संग शुरू यहाँ को आसपास, हामी भन्न चाहन्छौं कि "प्रत्येक सत्र एक SLX संग शुरू गर्नुपर्छ" र त्यो सत्य हो! चाहे तपाइँ एक बोंग वा एक कुंद, एक पाइप वा एक कागज मा तपाइँको जडी बूटी रमाईलो गर्न चाहानुहुन्छ, र विशेष गरी यदि तपाइँ एक हर्बल vaporizer को उपयोग गर्न छनौट गर्नुहुन्छ, उचित उपयोग ओ ...